စက်ပစ္စည်းအပလီကေးရှင်းများထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်လက်ကားပိုလီကရစ်တလင်းကုဗိုဘိုရွန်နိုက်ထရစ် (PCBN) | SinoDiam
PCBN ပေါင်းစပ်မှုအားမိုက်ခရွန် CBN အမှုန့်များအားကြွေထည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရောနှောခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်အလွန်ခက်ခဲပြီးအပူတည်ငြိမ်သောကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်ရန် PCBN ပစ္စည်းအများစုသည်ပေါင်းစည်းထားသောကာဗိုက်အလွှာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ CBN ဒြပ်ပေါင်းစိန်ပြီးနောက်လူသိများဒုတိယအခက်ခဲဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့မြင့်မားသောအပူနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်မာကျောသောသံမဏိ၊ မီးခိုးရောင်နှင့်ခွန်အားမြင့်မားသောသံ၊ မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိ၊ သံမဏိအလွိုင်းစသည့်သတ္တုပစ္စည်းများစသည်တို့အပါအ ၀ င်မြင့်မားသောမာကြောခြင်း (သို့) ခက်ခဲသောအရာများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
CBN အလွှာနှင့် Wc-Co အလွှာအမြင့် CBN အကြောင်းအရာ
2. မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်
၁။ တိကျသော dimension2 ။ မီးခိုးရောင်သွန်းလောင်း Iron3 ။ Powered Metal4 ။ အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
CBN အလွှာနှင့် Wc-Co အလွှာ
2. အတော်လေးနိမ့် CBN အကြောင်းအရာ
3. မြင့်မားသော wear အချိုးအစား
Hard cast သံ
စင်ကြယ်သော CBN glomerocryst
Tungsten carbide အခြေစိုက်စခန်းမရှိပါ
မြင့်မားသော wear ခံနိုင်ရည်
ရှေ့သို့ ကြွေထည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ရန်အတွက် Synthetic Polycrystalline Diamond (PCD)
နောက်တစ်ခု: CBN-MA10 Cubic Boron Nitride (CBN) မိုက်ခရွန်မှုန့် PCBN Ferrous Lapping Polishing Applications
1308 PDC ဖြတ်နှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာသတ္တုတွင်းများအတွက် ...